बोकाको मुखमा मास्क लगाएर ‘हामी नेपाली बोका हौं’ भन्दै बेलबारीका युवा सडकमा ! - Nepali in Australia
बोकाको मुखमा मास्क लगाएर ‘हामी नेपाली बोका हौं’ भन्दै बेलबारीका युवा सडकमा !
June 15, 2021 autherLeaveaComment on बोकाको मुखमा मास्क लगाएर ‘हामी नेपाली बोका हौं’ भन्दै बेलबारीका युवा सडकमा !
काठमाडौं– युवाहरु हामी नेपाली बोका हौं भन्दै सडकमा आएका छन् । उनीहरु बोका सहित सडकमा आएका हुन् । उनीहरुले ल्याएका बोकाको मुखमा समेत मास्क लगाइएको थियो ।
यो घटना मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको हो । त्यहाँका युवाहरू बोका–बाख्रासहित आ’न्दोलनमा उ’त्रिएका छन् । बोयर जातको बाख्रा किन्दा एक करोड एक लाख रुपैयाँ चलखेल भएको भन्दै स्थानीय युवाहरूले सोमबार नगरपालिकाको गेटमै पुगेर आ’न्दोलन गरेका हुन् ।
अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको भनिएका बोयर जातका बाख्राका पाठापाठी स्थानीय जातको भएको पुष्टि भएपछि मोरङको बेलबारी नगरपालिका र ग्रो अर्गानिक कृषि प्रालि सङ्खुवासभाबीच भएको बोयर बाख्रा खरिद सम्झौता खारेज भएको छ। बेलबारी नगरपालिकाको हिजो बसेको बसेको ६९ औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकले सो प्रालिसँग नगरपालिकाले बोयर बाख्रा खरिद सम्बन्धमा गत जेठ ३ गते गरेको सम्झौता खा’रेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ग्रो अर्गानिक कृषि प्रालिले ठेक्काबापत जम्मा गरेको जमानत रकम जफत गरी प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता योगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।नगर कार्यपालिका सदस्य बिन्दु कला गुरुङको संयोजकत्वमा छा’नविन समिति गठन गरेको थियो ।
ग्रो अर्गानिक कृषि प्रालि संखुवासभालाई ठेक्काबापत हालसम्म कुनै प्रकारका रकम भुक्तानी नगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।बेलबारी नगरपालिकाले अस्ट्रेलिया ल्याइएका बोयर जातको बाख्रा भन्दै कोरोनाको महामारीबीच नगरपालिकाले कृषक समूह तथा व्यवसायिक फर्महरूलाई गएको जेठ १५ मा बाख्राका पाठापाठी वितरण बितरण गरेको थियो ।
सो समयमा नगरपालिकाले ५२ वटा बोयर जातको बोका तथा ३८ वटा पाठी वितरण गरिएको थियो । एक करोड २५ लाख मूल्य खर्च गरेर नगरपालिकाले अस्ट्रेलियाबाट बोका ल्याएर वितरण गरेको दाबी गरेको केही दिन पछि ती बाख्रा अस्ट्रेलियाबाट नभई बागलुङ, धादिङ तथा पोखराबाट भि’त्र्याइएको खुलेको थियो ।
पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको आयात नियमन शाखाले निषेधाज्ञाको समयमा अस्ट्रेलियाबाट बोका पाठी न’भित्रिएको जानकारी दिएसँगै वास्तविकता बाहिरिएको थियो । नगरपालिकाले एक करोड २४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको भनिएको बाख्राहरू नवलपरासीको केशर एग्रो फर्मबाट किनिएको पुष्टि भएको थियो।
नगरपालिका र केशर एग्रो फमबीच बोयर जा’तका बाख्राका पाठापाठी खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको भनिएका बोयर जातका बाख्राका पाठा–पाठी लोकल भएको पुष्टि भएपछि सो घटनामा नगरपालिका समेत वि’वादमा मु’छिएको थियो ।
यसवर्ष निक्कै खत’रना’क मनसुन आउँदै, के-के छन् खत’रा ! मौसमविद्हरुको यस्तो चेता’वनी, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै)
बाहुबली स्टाइलमा मोटरसाइकल बोकेर हिँडेको यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल (भिडियो सहित)